Kudzivirirwa kwedata uye kuchengetedza zvakavanzika zveMushandisi zvinogoneka kune yavo data. Ruzivo urwu runofanirwa kuwanikwa panguva yekugara kwevatori vechikamu pane ino saiti kana ivo pavanoshandisa zviwanikwa zveiyo Avalanches Yemahara Yemagariro Nhau Chirongwa nemabasa ayo.
Haisi midhiya inoburitsa. Vashandi vedu havana bhodhi rekugadzirisa kuti vagadzirise zvinyorwa zvinobatsira. Iyo sosi haina kutungamira zvakananga kune izvo zvinhu zvakatumirwa pamapeji ayo.
Nheyo yekudzivirirwa kweruzivo (inozotevera kunzi Policy) inovhara iyo data iyo chirongwa cheAvalanches chinogamuchira kubva kuMushandisi kana uchitaurirana neResource. Mushandisi anofanirwa kushandisa masevhisi, zvigadzirwa, kana maficha eAvalanches (ino ichazonzi Project kana Resource). Iyo Resource inofanirwa zvakare kupedzisa chero zvibvumirano kana zvibvumirano nevatambi vechirongwa kuchengetedza yavo data.
Chirongwa cheAvalanches chinodzivirira zvakanyanya data revatori vechikamu uye rinoremekedza kodzero yavo yekuvanzika. Naizvozvo, Bumbiro rakagamuchira rondedzero:
data yenhengo, rakagadziriswa neAvalanches Resource
izvo zvinangwa zvekugadzirisa nekutora data kana mushandisi achishandisa iyo Avalanches Resource;
musimboti wekuti ruzivo rwunotambirwa kubva kune Avalanches Project webhusaiti inogadziriswa.
Uchishandisa Chishandiso, Mushandisi anobvuma uye anobvumirana nekugadziriswa kwedata rake nekuzvidira. Rondedzero yeiyi data yakatsanangurwa mune ino Policy. Kana kusawirirana kukamuka, anotora chikamu anofanira kurega kushanyira webhusaiti yeProjekti kana kusvika paProjekti pane peji redu reFacebook mameseji akananga: https://www.facebook.com/avalanches.global
Resource Avalanche inoongorora uye inounganidza dunhu rako neruremekedzo rukuru. Izvi ndezve:
data rakawanikwa kana mushandisi achizadza mafomu ekunyoresa, mvumo, uye kuzivikanwa kweMushandisi pane saiti;
data kubva kumafaira ekuki;
IP kero nenzvimbo.
Zvemunhu data zveAvalanches.com vashandisi zvinochengetwa pamaseva akachengetedzwa.
Vashandisi veAvalanches.com vanofanirwa kuziva nezvekuti mamwe maratidziro akaburitswa paPlatform yedu anogona kutungamira kune zvingangove zvisina kuchengetedzeka zviwanikwa (webhusaiti, kunyorera, nezvimwewo) kunze kwePuratifomu yedu inogona zvakare kukohwa dhata ravo. Yedu Platform haina kutora mutoro kune iyo yakakohwe dhata kana chero imwe mhedzisiro yekutevera yakabuda kunze zvinongedzo zvakaburitswa neVashandisi vedu pane avalanches.com.
Iyo yega data yemumwe munhu Avalanches.com chikuva vashandisi inogadziriswa neAvalanches LP inomiririrwa nemunhu akanyoreswa pasi pemitemo yeRepublic of Ireland, nehofisi yayo yakanyoreswa kuOfisi 29, Clifton House, Fitzwilliam Street Lower, Dublin 2, D02 XT91 (pano - Kambani). Iyo kambani muridzi weData Base iri kuchengetera Avalanches.com Yemunhu Mushandisi Dhata.
Dhata yemushandisi inogona kugadziriswa neAvalanches Project
Ruzivo rwakadai sekero yemushandisi email kana nhamba yefoni uye password zvakakosha mukugadzira account. Izvo hazvigoneke kuve avalanches.com mushandisi pasina kugovana yakadaro data.
Chero ruzivo rwunopihwa nevatori vechikamu nekuzvidira, pachedu, uye zvine hukama kune mumwe munhu zvinoonekwa senge yega data yemubatanidzwa. Vashandisi vedu vanotora mutoro uzere wedata ravo ravo rakapihwa kune avalanches.com.
Nharembozha inofanirwa kupihwa kuitira kuti uone mushandisi uye kupa mukana kune yakazara yakazara maSevhisi edu.
Iyo yega data yemubatanidzwa ichagadziriswa inoonekwa seyese dhata yakapihwa panguva yekunyoresa kana mukuita kwekushandisa Resource. Dhata inopfuudzwa uye inotumirwa nevatori vechikamu panzvimbo iyi nekuzvidira, kusanganisira ruzivo rwunotumirwa kuResource kubva kune mamwe maInternet services kana masocial network (e-mail, pikicha, zita, murume kana mukadzi, zera, degree rezvidzidzo, nezvimwewo).
Dhata iro rinongopfuudzwa kuProjekti uku uchishandisa saiti iyi inoshandiswa zvakare kugadzirisa. Dhata inopfuudzwa nesoftware yemubatanidzwa ichiiswa pane chake chishandiso. Iyo sosi inongogamuchira inotevera ruzivo:
Nhengo IP Kero
data kubva kukuki;
technical parameter emuMushandisi midziyo;
ruzivo nezve software inoshandiswa nemubatiri weprojekiti;
zuva uye nguva yekuwana maAvalanches;
nhoroondo yekushandisa uye zvikumbiro zvepeji, uyezve rumwe ruzivo rwechimiro chakafanana.
Iyo Avalanches chirongwa hachiratidzi iko iko kweye data dhata yakapihwa neMushandisi. Paunenge uchishandisa uye uchinyoresa muProjekiti, vatori vechikamu vanovimbisa kuzara uye kuenderana kweruzivo rwunopihwa iwe pachako.
Zvipo uye maDhiri: Kuti ushandire seplatifomu yezvibvumirano zvebhizimusi, kuchinjana kuchinjana, kana kupa, iyo Platform inobvumidzwa kuratidza ruzivo rweMushandisi rwekuonana, izvo zvakakosha kutanga chibvumirano pakati peMutengi neMutengesi. Ivo Vashandisi vane basa rakazara neruzivo rwekufambidzana rwunopihwa kune webhusaiti. Mushandisi anofanira kuziva kuti ruzivo rwake rwekuonana kana kunyange kero yekumba inogona kuwanikwa pachena pane yedu Platform kuitira kuitisa maDhiri.
Mushure mekunge Mushandisi aonana nePlatform rutsigiro, iyo Platform inochengeta mvumo yekukumbira yekuwedzera ruzivo rwemunhu kuitira kuti uwedzere kuongorora mushandisi.
Dhata yemushandisi kubva kumaprofile akabuda ayo akashandiswa kunyoresa chimiro chemushandisi pane avalanches.com vachishandisa masevhisi echokwadi (Facebook, Google, nezvimwewo) zvinopihwa kuti zvigadziriswe neAvalanches.
Izvo zvinangwa zvekugadzirisa Avalanches Resource ndeiyi:
Kuzivikanwa kweanotora chikamu muProjekti, pamwe nezvibvumirano nezvibvumirano neResource.
Kupa kweakakura akasiyana masevhisi uye kuitiswa kwezvibvumirano zvakasiyana kana zvibvumirano neanotora chikamu.
Kutaurirana neMushandisi, kusanganisira zvikumbiro uye zviziviso, pamwe nekutumira ruzivo rwunotungamira kushandiswa kwenzvimbo, kuitwa kwezvibvumirano nezvibvumirano, pamwe nekugadziriswa kwezvikumbiro uye zvikumbiro zvakagamuchirwa kubva kumubatanidzwa.
Kuvandudza kunaka kweResource, mashandiro ayo, zvemukati, uye zvemukati zvemashoko.
Kugadzirwa kwezvinhu zvekusimudzira zvinotarisana nevateereri vanofarira.
Dhata kuunganidzwa kwezvidzidzo zvakasiyana siyana, kusanganisira nhamba, zvichibva pane isingazivikanwe data.
Ruzivo rwusina kugadziriswa kana kuunganidzwa nemaAvalanches
Yega mushandisi data maererano nedzinza redzinza, vezvematongerwo enyika kana echitendero maonero uye zvitendero, kutora chikamu mumapato ezvematongerwo enyika, masangano evashandi, nezvimwe.
Maitiro, maitiro, uye mamiriro ekugadzirisa mushandisi dhata
Avalanches inochengetedza zvakavanzika zve data nemitemo yemukati.
Kuchengetedzwa kweData kunochengetwa, kunze kwekunge zviitiko apo Mushandisi akazvipira kuburitswa kwehumwe ruzivo rweveruzhinji kuwana pane ino saiti kana kuburikidza nemabasa ayo.
Mamiriro ezvinhu ekuchinjisa Mushandisi dhata kune wechitatu mapato
Kuendesa data reMushandisi kune vechitatu mapato kunogona kuitiswa mune dzinotevera zviitiko:
Mushandisi akabvuma kuchinjisa chikamu chedata rake.
Zvekushandisa zvakanaka kwekushanda kweResource kana kuitiswa kwechibvumirano kana chibvumirano.
Iko kuendesa kwakakosha kupa mupi wekutora chikamu nemasevhisi kana mashandiro eResource yakapihwa nevadyidzani vesaiti inoenderana nesaiti tekinoroji. Dhata remunhu wega rinogona kuchinjiswa kunogadziriswa kana kuzadzikiswa kwezvinangwa, zvinotemerwa neChibvumirano cheVashandisi nemasevhisi anoenderana.
Kuendesa kunopihwa nemitemo yenyika yeMushandisi iyo yaanogara kana zvimwe zvinoshanda.
Vatatu mapato anogona kuendesa kune yega data rakawanikwa mukati memhando dzakasiyana dzezvidzidzo kana zviyero, kusanganisira manhamba, kuongororwa uye kupihwa masevhisi kana kushanda pane mirairo yeProjekti;
Iyo sosi inodzikisira mukana wekuwana wega data revatori vechikamu, kuvhura mukana chete kune vesaiti vashandi uye vanobatirana avo vanoda ruzivo urwu kuti vaite basa kana kuona kufambiswa kwakanaka kweProjekti.
Mamiriro ezvinhu ekuwana Mushandisi dhata nevamwe Vashandisi
Dhata yemushandisi inogona kuwanikwa neumwe Mushandisi wePuratifomu pachikamu Chakanaka cheavalanches.com webhusaiti kuti utange Deal pakati pevaviri. Ruzivo rwakadai harugone kuve chimwe chinhu kunze kwekubata ruzivo (email kero, nhamba yefoni, kana maficha enhau) nekero yenzvimbo.
Iyo Platform inochengeta kodzero yekugovana zvakavanzika mushandisi data nevakuru maererano nemutemo wemuno: kumira uye kuunza kune avo vane hunyengeri vashandisi, kubvisa kusanzwisisana, kana kutsigira nharo dzinogona / dziri kutyora mitemo yemuno. Zvakare, iyo Platform inogona kuzivisa mushandisi data nekutsvaga kwavo zvisiri pamutemo izvo zviri kutora nzvimbo paWebhusaiti kana nekugamuchira zvichemo kubva kune vamwe chikuva Vashandisi.
Kuchengetedza, kubvisa, uye kugadzirisa kweMushandisi data
Mushandisi ane kodzero uye kugona chero nguva kushandisa saiti zvishoma kana zvachose kushandura dhata rake uchishandisa iro basa rekugadzirisa account kana uchishanyira Resource account yako.
Mushandisi ane kodzero nemukana chero nguva yekudzima zvachose data rake raakapihwa kana achinyoresa paProjekiti webhusaiti nekubvisa account. Nekudaro, izvi zvinogona kukonzeresa pakurambidzwa kwekutora mukana kwemumwe munhu kuita zvimwe zviitiko zvesaiti.
Dhata remunhu rinochengetwa panguva yese yaunoshandisa account pane saiti. Iyo zvakare inochengetera data risingade rakanyoreswa mutora chikamu kana chero chiito nezvibvumirano kana zvibvumirano. Kubviswa kwekushandiswa uye kumisikidzwa kwezvibvumirano zvevashandisi zveakaunzi pane webhusaiti Resource kunoonekwa senge kubviswa kweakaundi yenhengo.
Counters, makuki, pasocial network
Iwo mapeji eProjekti anongotora ruzivo nezve kushandiswa kweiyo saiti mashandiro uchishandisa makuki. Iyo data yakawanikwa nerubatsiro rwavo inoitirwa kupa iye anotora chikamu mabasa akasarudzika, kugadzirisa, kugadzira mishambadziro yekushambadzira, pamwe nekuitisa zvidzidzo zvakasiyana.
Iko kushandiswa kweamwe mashandiro eResource kunogona kupihwa chete kana makuki achitenderwa uye nekutambirwa. Kana mukwikwidzi achirambidza kutambira kana kugamuchirwa kwemakuki nekushandura marongero ebrowser, mukana wekuita saiti kwakadaro kunogona kushomeka.
Cookies uye macounters akaiswa pamapeji eWebhusaiti webhusaiti anogona kushandiswa kutora, kugadzirisa, uyezve kuongorora ruzivo rwakagamuchirwa mukudyidzana kwevatori vechikamu newebsite, kuona kushanda kwemabasa ayo kana zvakawandisa. Iyo technical parameter yemamita akaiswa neProjekti uye anogona kuchinja pasina kumberi ziviso kuMushandisi.
Sechikamu chebasa resaiti, pane zvinhu zvakadai zvemasocial network se «Govana» mabhatani uye zvirongwa zvinofambidzana zvekupindura nekutevera maitiro evatori vechikamu kune ruzivo rwakatambirwa. Zvinhu zvemasocial network zvinonyora IP kero yeMushandisi, ruzivo nezve chiitiko chake uye kudyidzana neResource webhusaiti, uyezve chengetedza makuki kuti uone kushanda chaiko kwezvinhu izvi uye zvidimbu. Iko kudyidzana kweMushandisi nemafomu emasocial network anotongwa neyakavanzika mutemo wezviwanikwa nemakambani anovapa.
Mushandisi Dziviriro Dhata Matanho
Iyo sosi inotora matanho ehunyanzvi uye ehurongwa kuti ive nechokwadi chedanho rinodiwa rekuchengetedza dhata rega uye rakavanzika kubva kuzviito zvisiri pamutemo zvevatatu kana malware, semuenzaniso, kuparadza, kuvharira, kugadzirisa, kuteedzera, kugovera kana kuwana netsaona, nezvimwe.
Shanduko muPolisi dzinogona kukanganiswa nemitemo yenyika uko kuwanikwa kwewebsite yeProjekiti kwakavhurika kana zvinodiwa nemutemo wepasi rese.
Iyo sosi inochengetera kodzero yekugadzirisa iyozvino Policy. Paunenge uchiita shanduko dzakakodzera kune yazvino shanduro, zuva rekugadziriswa kwayo kwekupedzisira rinoratidzwa. Iyo vhezheni nyowani inotanga kushanda kubva panguva iyo painoburitswa pane saiti kana izvi zvisinga pesane neiyo nyowani vhezheni yePolisi uye nemitemo yenyika idzo mukana wekuwana webhusaiti yeProjekti yakavhurwa.
Vapepeti veResource vane mvumo yekusaburitsa zvemukati (zvinyorwa, makomendi, zvirevo, nezvimwewo) zvakagamuchirwa kubva kuMushandisi, kana ruzivo rwunotumirwa neMushandisi rungatariswe neveProjita Editors seine mafoni kune:
kukurudzira kurwisana kwemarudzi kana kwemauto;
kushungurudzwa mupfungwa kana mumuviri;
kutumirwa kwezviito zvehugandanga, kuparadza, kusateerera kwevanhu;
kutengeswa kwevanhu, uranda, kana zvinonyadzisira.
Vapepeti vane zvakare kodzero yekusaburitsa chero rumwe ruzivo rwunotyora mutemo wenyika yenyika yekugara kweMushandisi kana mutemo wepasirese.
Basa reResource uye Mushandisi
Chero ruzivo rwunoburitswa nemunhu anotora chikamu panzvimbo iyi pachinzvimbo chake, anoisa pawebhusaiti yeProjekiti nekuzvidira. Ruzivo rwuchaburitswa kana mukwikwidzi akapfuudza mvumo yeSMS pamwe nekusimbiswa kwenzvimbo yake nezvibvumirano nemitemo yekuiswa kweResource. Mune ramangwana, anotora chikamu anoona nezvekurongeka kwemashoko akaburitswa iye pachake.
Vapepeti veProjekiti havasi ivo vane basa nekururama kweruzivo rwakatumirwa panzvimbo iyi.
Mitemo yeProjekti inorambidza kutevedzera nekutumira pamapeji eRuzivo zviwanikwa zvinowira pasi pemutemo wekopiraiti.
Mitemo yeResource inorambidza kutevedzera nekuparadzira ruzivo kubva pamapeji eprojekiti webhusaiti pasina ruzivo uye mvumo yemunyori.